Ginea Vaovao - Wikipedia
I Ginea Vaovao dia nosy ao amin' ny vondro-nosy Melanezia, ao Ôseania izay manakaiky ny Ranomasimbe Pasifika ao andrefana, manana velarana mirefy 775 210 km2, ka laharana fahatelo amin' ny nosy be velarana indrindra eto an-tany, aorian' i Aostralia sy i Groenlandy.
Nosy ao avaratr' i Aostralia i Ginea Vaovao, ao atsinanana-atsimo-atsinanan' ny tamba-nosy Môloka sy ao andrefan' i Britaina Vaovao, ao amin' ny faritry ny Ranomasimbe Pasifika atao hoe Melanezia. Ao atsimony ny andilan-dranomasina Tora sy ny Ranomasin' i Arafora, izay manasaraka azy amin' i Aostralia, ao atsinanana ny Ranomasin' ny Sôlômôna sy ny Ranomasin' i Bismarck, ary ao avaratra ny Ranomasimbe Pasifika. Mirefy 2 400 km any ho any ny halavany ary 700 km ny sakany. Misy tandavan-tendrombohitra mitsinjara roa saika mitovy ny atsinanana sy ny andrefana. Ny tany avo indrindra dia mirefy 4 884 m ao amin' ny tendro Puncak Jaya, ao amin' ny tendrombohitra Maoke, ao amin' ny tapany andrefan' io nosy io.
Firenena roa no mizara an' i Ginea Vaovao, dia i Ginea Vaovao Andrefana (izay ahitana faritany indôneziana roa: i Papoazia sy i Papoazia Andrefana), sy ny ampahany lehibe amin' ny fanjakana mahaleo tenan' i Papoazia-Ginea-Vaovao. Miisa 10 tapitrisa any ho any ny mponina ao amin' io nosy lehibe io tamin' ny taona 2014.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ginea_Vaovao&oldid=1037989"
Voaova farany tamin'ny 20 Septambra 2021 amin'ny 05:50 ity pejy ity.